Laptops - Qalabka Qalabka | Wararka Gadget (Bogga 2)
Waxay u fidisaa maanta PcComponentes inay u dabaaldegto Jimcaha Madow
PcComponentes waxay siineysaa qashinkeena maalin kasta oo ay bixiso xisaabinta si loogu dabaaldego Black Friday
Sidoo kale waa MacBookga cusub iyo Mac Mini 2018
Ka dib ku dhowaad 4 sano iyada oo aan la cusbooneysiin labada Mac Mini iyo MacBook Air, ragga ka socda Cupertino waxay soo bandhigeen cusboonaysiinta labada qalab.
Dusha Go: beddelka iPad-ka ee Windows 10 iyo ku dhowaad isku qiimo
Beddelka Apple ee iPad-ka wuxuu ka yimid Microsoft waxaana loo yaqaan 'Surface Go' oo ah aalad suuqa ku dhacda $ 399.
Google wuxuu raadinayaa shahaadada Windows 10 ee Pixelbooks
Shirkadda raadinta internetka, Google, waxay raadineysaa shahaadada lagama maarmaanka u ah inay awood u yeelato inay ku maamusho Windows 10 Pixelbool
Samsung Chromebook Plus V2, oo wata S-Pen iyo kamarad 13 Mpx ah oo ku taal kumbuyuutarka
Samsung waxay soo bandhigeysaa qalab cusub oo ku saleysan ChromeOS. Magaceedu waa Samsung chromebook Plus V2 waxaanan kuu sheegaynaa waxkasta oo ay ku siiso
ASUS ZenBook Pro oo leh ScreenPad, laptop ah oo shaashad taabasho ah ku leh trackpad-keeda
ASUS ZenBook Pro waa khadka cusub ee kumbuyuutarrada gacanta ee loogu talagalay xirfadleyda shaashad labaad ku rakibtay wadooyinkooda loo yaqaan 'ScreenPad'
Acer wuxuu soo bandhigayaa beddelkiisa ugu horreeya ee loo yaqaan '15-inch' Chromebook
Shirkadda Acer ayaa soo bandhigtay laba laptop oo cusub oo loo yaqaan 'Acer Chromebook' oo laptops ah, oo ay maamusho ChromeOS, midkoodna ka mid yahay qaybta beddelka.
HP Omen 15 2018, awood dheeraad ah oo ku jirta jiis yar oo fudud
HP waxay horumarisay laptop-keeda ciyaaraha waxayna soo bandhigtay HP Omen 15 2018, oo ah kombiyuutar aad u badan oo ka sarreeya kombuyuutar aad u awood badan marka loo eego noocii hore
Astaamaha in laptop-ka ciyaaraha wanaagsan uu lahaado 2018
Maxaa ka muuqda laptop-ka ciyaar wanaagsani waa inuu lahaadaa. Soo ogow astaamaha aasaasiga ah ee laptop kasta oo wanaagsan oo ciyaaruhu leeyihiin maanta. Tilmaame kaa caawin doona inaad doorato qaabka kuugu fiican adiga.
Huawei wuxuu jabiyaa rikoodhka iibka ee taleefannada casriga ah ee taxanaha ah
In kasta oo aan laga heli karin Mareykanka diidmada dowladda dalkaas awgeed, iibka ...
Honor MagicBook, laptop kale oo Huawei ah oo leh astaamo aad u fiican iyo qiimo soo jiidasho leh
Honor MagicBook waa laptop-kii ugu horreeyay ee ka yimaada Aasiya. Waa koox lagu kala sooci karo buugaagta 'ultrabooks' dhexdooda; wuxuu leeyahay naqshad aad u wanaagsan iyo qiimo aan laga adkaan karin
Apple waxay ku isticmaali doontaa processor-kiisa gaarka ah Macs
Apple ayaa qodeysa Intel waxayna u adeegsan doontaa processor-keeda gaarka ah ee Macs. Ogow wax badan oo ku saabsan qorshayaasha ay shirkaddu ku bilaabayso inay adeegsato processor-keeda kombiyuutarada.
Samsung waxay soo bandhigaysaa Buug-yaraha cusub ee Notebook 3 iyo Buugga Xusuusta 5
Samsung waxay soo bandhigtay laynkeeda cusub ee laptop-ka: Samsung Notebook 3 iyo Samsung Notebook 5. Labaduba waxay leeyihiin astaamo isku mid ah iyo culeys ka hooseeya 2 kiiloogaraam
Laptop-ka Xiaomi Mi Gaming, oo ah laptop-ka nooca loogu talagalay cayaartoyda
Xiaomi Mi Gaming Laptop waa laptop-kii ugu horreeyay ee shirkadda Shiinaha ee diiradda saaraya qaybta ciyaarta fiidiyowga. Laba qaabeyn oo macquul ah iyo qiimo jabitaan
Microsoft Surface Book 2 hadda waxaa laga iibsan karaa Spain
Kooxdii ugu dambeysay ee Microsoft waxay gaaraan Spain. Waa Microsoft Surface Book 2. In kastoo aad heli karto oo keliya, hadda, oo leh nooca 13,5-inji ah
Huawei MateBook X Pro, laptop ah oo leh shaashad bilaa xayndaab iyo layaab kumbuyuutarka
Laptop cusub ayaa ku biiraya buugga shirkadda Huawei. Kani waa cusub ee Huawei MateBook X Pro, laptop ah oo nashqadeyn weyn leh iyo sir ku hoos qarsoon kiiboodhka
Microsoft waxay soo kordhisay nooc cusub oo ka raqiis ah laptop-ka dusha sare
Microsoft waxay soo bandhigtay nooc cusub oo heer gelitaan ah oo ah laptop-kiisa oogada ah. Xilligan la joogo waxaa laga heli karaa oo keliya Mareykanka oo waxaad badbaadin kartaa 200 oo doolar
Apple waxay diyaarineysaa bedelka MacBook Air ee caanka ah
Dhamaadka MacBook Air ayaa laga yaabaa inuu dhow yahay. Marka la eego wixii la ogaa, beddelkiisu wuxuu ku jiraa foornada oo waxay noqon doontaa moodal 13-inji ah oo ka mid ah heerarka gelitaanka
Acer Chromebook Spin 11, oo ah jaangooyo cusub oo loogu talagalay ardayda
Bisha Abriil ee soo socota, Acer Chromebook cusub ayaa garaaci doona dukaamada. Waa Acer Chromebook Spin 11, kumbuyuutar sidoo kale noqda kiniin
Waxay u beddelaan ZX Spectrum Next kumbuyuutar ay ugu mahadcelinayaan daabacaadda 3D
Ma jeceshahay inaad iskaa u sameysatid laptop adiga oo kusalaysan ZX Spectrum Next? Hagaag, halkan waxaan kaaga tagi doonaa sida aad ugu guuleysan laheyd mahadsanid daabacaadda 3D
Microsoft Surface Book 2 ayaa dhawaan gaari doona Spain
Mid ka mid ah Laptops-yada aadka loo doonayo Microosft ayaa imaan doona Spain todobaadyada soo socda. Kuwani waa moodooyinka 13 iyo 15-inji ee Surface Book 2
Lenovo Miix 630, xalal badan oo la qaadan karo oo leh ismaamullo lala yaabo
Lenovo waxay soo bandhigtay sida ay uga go'an tahay markasta Markasta-Marwalba Kuxiran Madal magaceeduna waa Lenovo Miix 630, kumbuyuutar xiiso leh oo leh madaxbanaani
Mashruuca Linda ama marka Telefoonkaaga Razer uu noqdo laptop
Maxaa dhacaya haddii aan kuu sheegno in taleefankaaga Razer uu dhawaan noqon karo laptop-ka Android? Shirkaddu waxay ka shaqeysaa sidii loo bilaabi lahaa Mashruuca Linda
Dell wuxuu cusbooneysiinayaa kala duwanaanta XPS 13, oo leh shaashadda 4K, processor-rada cusub iyo isku xirnaanta weyn
Shirkadda Mareykanka ee Dell, ayaa hadda soo bandhigtay CES, oo bilaaban doonta maalmo yar, dib u cusbooneysiinta noocyada aaladaha casriga ah ee XPS 13
Huawei Matebook D waxaa lagu cusbooneysiiyay processor-yo iyo muuqaallo cusub
Huawei wuxuu cusbooneysiiyaa kombuyuutarradeeda kala duwan Huawei Matebook D (15 inji) oo qayb ka ah processor-yada iyo kaararka naqshadeynta Intel-ka cusub
Samsung iyo Xioami waxay lahaan doonaan Windows 10 laptops oo leh processor-yada Snapdragon
Mustaqbalka laptop-yada ayaa ku jira isticmaalka processor-ka mobilada. Tani waxay gaareysaa ismaamul ...
Samsung Notebook 9 (2018) iyo Samsung Notebook 9 Pen, oo ka awood badan isla markaana leh S-Pen
Samsung waxay leedahay laptops cusub oo ku jira buugiisa: Samsung Notebook 9 2018 iyo Samsung Notebook 9 Pen oo ay la socoto qaababka S-Pen
ASUS NovaGo, laptop-ka oo wata processor mobilo iyo 22 saacadood oo ismaamul ah
Suuqa laptop-ka ayaa dib isu soo cusbooneysiiya ASUS-na waxay ka mid tahay kuwa ugu horreeya ee leh ASUS NovaGo, laptop-ka wadnaha iyo madax-bannaanida mobilka
Lenovo V730, laptop aad u sareeya oo aan wadan magaca 'ThinkPad'
Shirkadda Shiinaha laga leeyahay ee Lenovo ayaa soo bandhigtay buug cusub oo heer sare ah, oo ku qotoma xirfado shaqo oo ka maqan magaca qoyska ee 'ThinkPad'. Waxay ku saabsan tahay Lenovo V730
Microsoft Office hadda waa loo heli karaa Chromebook
Qalabka Microsoft ee xafiiska ayaa hadda laga heli karaa dukaanka dalabka ee Chromebook gebi ahaanba bilaash.
ASUS ZenBook Pro UX550 hadda waxaa laga heli karaa Spain
ASUS waxay Spain ka soo saartay laptop cusub oo heer sare ah. Waa ASUS ZenBook Pro UX550, laptop ah qaabeyn iyo waxqabad wanaagsan
Barnaamijkan waxaad ku maamuli kartaa barnaamijyada Windows-ka Chromebook
CrossOver waa barnaamij lagu socodsiiyo barnaamijyada Windows barnaamijyada kale. Kii ugu dambeeyay ee ku raaxeysan kara tan ChromeOS
Chuwi SurBook Mini ayaa imaan doona bisha soo socota ee November
Chuwi SurBook Mini waa nooca la yareeyay ee qalabka caanka ah ee shirkadda Shiinaha laga leeyahay. Midkani wuxuu garaaci doonaa dukaamada 11 Noofambar.
HP ZBook x2, la beddeli karo oo ah awood saafi ah
HP ZBook x2 waa kii ugu dambeeyay ee laga beddeli karo shirkadda dooneysa inay la tartanto Microsoft's Surface Book 2 ama MacBook Pro
Microsoft Surface Book 2, laptop dhab ah oo lagula dagaallamayo MacBook Pro
Microsoft Surface Book 2 waa jiilka labaad ee buugaagta xusuus-qorka ah oo uu dhisay Redmond. Waxaa jira laba nooc oo iyagu waa ka awood badan yihiin. Si dhow u baro iyaga
Chuwi Laptop Air, laptop cusub oo uu dhiirrigaliyay MacBook Air
Chuwi Laptop Air waa buug xaraash ah oo bixiya ismaamul wanaagsan; Waxay leedahay shaashad buuxda HD iyo aluminium aluminium. Dhamaan qiimo ka hooseeya 400 euro
Dhammaan astaamaha Google Pixelbook waa la sifeeyey
Kahor soo bandhigideeda, waxaa suurtagal noqotay in la ogaado qaar ka mid ah faahfaahinta cusub ee Google Chromebook, Google Pixelbook
Kano waxay soo bandhigeysaa laptop-ka DIY ee carruurta loogu talagalay
Kano waxay soo bandhigtay xirmo cusub si caruurtu ugu baran karaan barnaamijka habka ugu xiisaha badan. Waxay ku saabsan tahay laptop-ka Kano
Lenovo wuxuu u dabaaldegaa sannad-guurada 25aad ee ThinkPad-kii ugu horreeyay oo leh nooc gaar ah
Lenovo wuxuu u dabaaldegayaa 25 sano oo ah markii ugu horreysay IBM ThinkPad uu aado suuqa. waxayna ku sameysaa nooc aad u gaar ah: Lenovo ThinkPad 25
Xog sifeeysan oo ku saabsan Google Pixelbook, kuwani waa astaamahiisa
Maanta waxaan haynaa xog kulul oo ku saabsan sifooyinka Pixelbook ay ku jiraan, iyo tan ka sii muhiimsan, qiimaheeda kor u kaca.
LG Gram waa laptop aad ufudud u ah dhammaan dhagaystayaasha
Aynu wax yar ka sii ogaanno LG Gram-kan gaarka ah, laptop-ka ugu fiican, madax-bannaan iyo kan ugu badan ee laga helo shirkadda South Korea.
Lenovo Retro ThinkPad si dib loogu xasuusto waqtiyadii tagay
Intee in le'eg ayey Lenovo la socotaa Retro ThinkPad? Hagaag, waxay umuuqataa waxbadan, waa xaqiiqo inbadan ka muuqata oo waxay noqon doontaa laptop qaali ah.
Lenovo wuxuu sii wadaa inuu ku sharaddeeyo beddelka wuxuuna soo bandhigayaa Yoga 920 iyo 720
Shirkadda Shiinaha laga leeyahay ee Lenovo ayaa ku soo bandhigtay IFA laba nooc oo cusub oo la beddeli karo: Yoga 920 iyo Yoga 720
ASUS ZenBook Flip S, oo loo beddeli karo khafiifnimo daran
ASUS ZenBook Flip S waa runtii khafiif ah oo la beddeli karo, oo ku shaqeeya Windows, wuxuu leeyahay muuqaal 4K ah iyo processor-ka Intel Core ee awoodda badan
Swift 5, Spin 5 iyo Switch 7 waa Acer cusub oo la beddeli karo
Shirkadda Taiwanese ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay noocyada cusub ee alaabada la beddelayo iyo Ultraslim.
Acer's Chromebook 15 waa sharad cusub oo shirkaddu u gashay ChromeOS
Sharadkii ugu dambeeyay ee Acer ee ChromeOS waxaa lagu magacaabaa Chromebook 15, oo ah nooc ilaa 12 saacadood oo madax-bannaanid ah iyo illaa 8 GB oo RAM ah
Primux ioxbook 1402f, Laptop qiimo dhimis wadnaha ah [DIB U EEGID]
Maanta waxaan kuu soo bandhigi doonnaa laptop-ka loogu talagalay kuwa si aasaasi ah u adeegsada kombuyuutarka iyagoon ka tanaasulin naqshadeynta, fudeydka iyo ismaamulka, Primux ioxbook 1402f.
HP OMEN X Laptop, laptop kumbuyuutareedka lagu ciyaaro oo leh suurtagalnimada 'overclocking'
HP wuxuu ku balaariyay xariiqa ciyaarta la imaatinka laptop-ka HP OMEN, laptop ayaa diirada saaraya isticmaalaha gamer-ka doonaya inuu ku raaxeysto inta badan
ASUS Vivobook Pro N580, noocyada cusub ee laptop-yada 'ciyaaraha' ee ka socda Aasiya
ASUS waxay soo bandhigtay laptop cusub oo heer sare ah oo loogu talagalay ciyaaraha iyo sidoo kale muuqaalka iyo xirfadlayaasha naqshadeynta: ASUS Vivobook Pro N580
EVGA SC17, laptop-ka dhabta ah ee ciyaarta aad rabto inaad haysato
EVGA SC17 wuxuu noqon doonaa laptop-ka ciyaaraha ee gamer kasta uu doonayo inuu yeesho. Aynu si dhow u eegno badeecadan xiisaha leh.
Acer Chromebook 11 C771, wanaagsan, fiican oo raqiis ah jawiga dugsiga
Acer Chromebook 11 C771 waa laptop kaas oo na siin doona dhamaan astaamaha aan ugu baahan karno dhanka waxbarashada anaga oo aan lacag badan ku bixin.
Kuwani waa kombuyuutarrada gacanta ee ugu fiican suuqa
Maanta waxaan kuu sheegi doonnaa noocyada ugu fiican ee kumbuyuutarrada gacanta lagu ciyaaro ee aan ka heli karno suuqa.
Dell wuxuu soo bandhigayaa laptop-kii ugu horreeyay ee lacag la'aan ku shaqeeya
Shirkadda Dell waxay soo bandhigtay laptop-kii ugu horreeyay ee suuqa ku shaqeeya iyadoo la adeegsanayo nidaam lacag-la'aan wireless ah, laakiin qiimo aad u qaali ah.
Panasonic wuxuu soo bandhigayaa beddelka shaqooyinka ugu adag
Panasonic ayaa hadda soo bandhigtay Toughbook CF-XZ6, oo ah laptop adag halkaasoo adkeysiga iyo xoogga ay muhiim u yihiin.
Laptop-ka cusub ee Microsoft wuxuu helayaa 0 iFixit
Laptop-ka 'Microsoft Suface Laptop' wuxuu ka helay iFixit darajadii ugu xumeyd ee laga heli karo dhanka dayactirka fursadaha: eber.
Shaashad isku mid ah, isku cabir ah. Kani waa laptop-ka cusub ee Razer Blade Stealth
Shirkadda Razer waxay soo bandhigeysaa Blade Stealth, laptop cusub oo kordhinaya shaashadeeda 12,5 ilaa 13,3 inji iyada oo aan la kordhin cabirka qalabka
Dusha sare ee Microsoft ayaa ka sarreeya qiimeynta kiniiniyada ka hor iPad-ka
Markii ugu horreysay, shirkadda Microsoft ee loo yaqaan 'Surface' waxay si fiican uga qancisay dadka isticmaala ipadka guud ahaan qanacsanaanta iyo waxqabadka.
Microsoft waxay ku bixisaa nooc cusub oo buugga ah 'Surface Book' dukaankeeda rasmiga ah
Ragga ka socda Redmond waxay soo kordhiyeen nooc cusub oo ah Surface Book, oo ah nooc suuqa soo gali doona laga bilaabo Maarso 10.
Surface Pro 5 oo lagu soo bandhigayo Windows 10 Cusboonaysiinta Abuureyaasha
Xogtii ugu dambeysay ee la helay waxay muujineysaa in bisha Abriil ay noqon karto bilowga jiilka shanaad ee Surface Pro
Microsoft sidoo kale waxay kor u qaadaa qiimaha 'Surface Pro 4' sababtoo ah Brexit
Shirkadda weyn ee 'Redmond' ayaa hadda ku dhawaaqday kor u kac cusub oo ku yimid qiimaha badeecadaheeda sababtuna tahay ka bixitaankii Boqortooyada Ingiriiska ee Midowga Yurub
NSA waxay cadeyneysaa isticmaalka aaladaha dusha sare leh Windows 10
Wakaaladda Amniga Qaranka (NSA) ayaa hadda ku dhawaaqday caddeynta Windows 10 iyo dusha sare oo ah aalad aamin ah
Caddaymaha Samsung Galaxy TabPro S2 oo leh Windows 10
Waxaan ku tusineynaa qeexitaannada ku dhowaad dhammaan suurtagalnimada maareynta Samsung Galaxy TabPro S2
Beta-ka cusub ee macOS 10.12.4 waxaa loola jeedaa MacBook Pro cusub ee 2017
Beta-kii ugu dambeeyay ee Apple soo bandhigtay wuxuu bixiyaa macluumaad ku saabsan moodooyinka cusub ee MacBook Pro ee imaan doona sanadkan.
Apple wuxuu ku shaqeeyaa processor cusub oo loogu talagalay barnaamijyadiisa 'MacBook Pros' laga bilaabo 2017
Xanta badan ayaa tilmaamaysa in Apple ay ka shaqeyneyso processor-ka cusub oo markii ugu horreysay ka soo muuqan doona barnaamijka MacBook Pro 2017 oo dhawaan si rasmi ah loo soo bandhigi doono.
Qaar ka mid ah jaamacadaha Mareykanka waxay ku qasbaan inay bar-tilmaameedsadaan Taabta Barta cusub ee MacBook-ga ee imtixaanada
Jaamacadaha Mareykanka ayaa mamnuucaya isticmaalka MacBook Pro oo leh Touch Bar marka imtixaanka la qaadayo
Microsoft waxay joojineysaa iibinta Surface 3
Ragga Microsoft waxay hadda ku dhawaaqeen in Surface 3 uu dhammaaday oo uusan hadda iib ahayn dalal badan.
Microsoft waxay bilaabi doontaa laptops lacag dhan $ 189 si ay ula tartanto Chromebooks
Microsoft waxay qorsheyneysaa inay soo saarto kumbuyuutarrada gacanta kumbuyuutarrada $ 189 si ay ula wareegto Chromebook-ka ku sii xoogaysanaya dugsiyada Mareykanka.
Acer TravelMate Spin B1 waa xulashada ugu fiican ee ardayda
Aynu si dhow u eegno waxa ka dhigaya laptop-kan inuu yahay beddel aad u xiiso badan ardayda.
Dhammaan Chromebooks-ka la sii daayay sannadkan waxay marin u heli doonaan Google Play
Dhammaan moodooyinka loo yaqaan 'Chromebook' ee laga bilaabay suuqa sannadkan oo dhan waxay la jaan qaadayaan Google Play Store
Samsung Odyssey, ayaa soo bandhigtay buugga ciyaaraha ee Samsung
Samsung waa mid kamid ah shirkadaha ka shaqeeya dhamaan wax soo saarka macaamiisha shaki la’aanna waa shirkadda ...
ASUS Pro, laptop ah oo aan cidna dan ka lahayn
Intii lagu gudajiray CES 2017 oo aan buuq badan sameyn, ASUS ayaa naga yaabisay soo bandhigida ASUS Pro cusub, laptop aad u gooni ah oo cajiib ah.
Awood badan oo loogu talagalay ASUS Chromebooks
Sida ku xusan wararkii ugu dambeeyay, ASUS ayaa naga yaabin doonta CES 2017 iyadoo la soo jeedin cusub oo aad u awood badan loogu talagay Chromebook-keeda.
Warbixinnada Macaamiilku waxay ka baxeen talooyinkooda MacBook Pro cusub
Warbixinnada Macaamiisha ayaa ka reebay MacBook Pro-ka cusub qalabka lagula taliyay, dhibaatooyinka batteriga ee uu terminalku muujiyay awgeed.
Laptop-ka cusub ee Xiaomi hada waa mid rasmi ah wuxuuna sameeyay boodbood tayo leh
Shirkadda Xiaomi ayaa maanta si rasmi ah u soo bandhigtay laba nooc oo cusub oo ah laptop-keeda guusha gaadhay ee leh isku xidhka 4G iyo naqshad fudud.
Surface Pro 4 wuxuu helayaa cusbooneysiin cusub oo firmware ah
Ragga Microsoft waxay hadda sii daayeen cusbooneysiin cusub oo firmware ah oo loogu talagalay Surface Pro 4, hagaajinta xasilloonida nidaamka iyo waxqabadka Cortana.
Samsung waxay kala xaajooneysaa Lenovo iibinta qeybteeda kumbuyuutarka
Shirkada laga leeyahay Korea ee Samsung ayaa kala xaajoonaysa Lenovo iibinta qaybteeda laptop-ka.
Microsoft waxay hoos u dhigeysaa qiimaha nooca gelitaanka dusha sare ee Buugga
Microsoft ayaa hadda ku dhawaaqday qiimo dhimis qiimo leh oo loogu talagalay nooca gelitaanka dusha sare ee buuga
Alienware 13 waa laptop-VR-diyaar u ah cabbirka xaddidan
Alienware 13, laptop ayaa loogu talagalay oo loogu talagalay Xaqiiqda Virtual, oo leh astaamaha gaarka ah ee leh shaashadda "kaliya" 13 inji.
Baro barnaamijka cusub ee 'MacBook Pro' ee Apple ay si qoto dheer u soo bandhigtay
Waxaan ku tusaynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato MacBook Pro cusub iyo Taabashadiisa cusub ee Bar, iyo sidoo kale qiimaha iyo helitaanka.
Dell XPS 13-ka cusub wuxuu yeelan doonaa qaab "rose gold" ah
Dell wuxuu cusbooneysiiyay qaabkeeda Dell XPS 13, oo ah nooc hadda leh midab dahabi ah oo soo baxa oo soo jiita dareenka dadka isticmaala qaarkood ...
HacBook, laptop ah oo shaqeeya OS X waana la cusboonaysiin karaa
Waxaan u soo bandhigeynaa HacBook, tartanka tooska ah ee kombiyuutarada Mac, qiimo jaban, laptop kor loo qaadi karo oo ku shaqeeya OS X nidaamka qalliinka.
Microsoft waxay xaqiijineysaa jiritaanka Surface Book 2
Microsoft waxay xaqiijisay jiritaanka Surface Book 2 iyada oo loo marayo teaser, sawirkaas oo lagu daabacay shabakadaha bulshada ee Microsoft ...
HP waxay soo saartay Stream 11, laptop yar oo raqiis ah oo fudud
HP waxay soo saartay khadad xusuus qor ah oo loo yaqaan 'Stream' iyo qaabkeeda 'Stream 11' kaas oo bixiya aragti ka duwan buugga xusuusta daruuriga ku salaysan ...
Microsoft Surface Book 2 wuxuu yeelan doonaa faseex cusub
Microsoft Surface Book 2 wuxuu yeelan doonaa naqshad cusub, faseex cusub oo si weyn kor ugu qaadaya laptop-ka Microsoft, kana dhigaya mid iska caabin badan ...
Tani waa gudaha gudaha Xiaomi Mi Notebook Air
Imaatinka laptop-kan Xiaomi wuxuu ku yimid si lama filaan ah oo ku dhowaad digniin la'aan dhawr bilood ka dib ama ...
VAIO waxay ku noqotaa xamuulka soo bandhigaya VAIO C15
VAIO C15, laptop oo wata astaamaha lagu garto shirkadda iyo midabbo gaar ah oo gaar ah. Taasi haddii, astaamaha dhammaadka hoose.
Xiaomi waxay ka dhigeysaa laptopskeedii ugu horreeyay ee rasmi ah, aan soo dhaweyno Xiaomi Mi Notebook Air
Xiaomi ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay laptop-kiisii ​​ugu horeeyay daqiiqado ka hor, kaasoo ay ku baabisay magaca Xiaomi Mi Notebook Air.
Xiaomi Mi Notebook, laptop-ka Xiaomi, waxaa la soo bandhigi doonaa 27-ka July
Xiaomi Mi Notebook wuxuu noqon doonaa laptop-kii ugu horreeyay ee Xiaomi leh Windows 10 iyo shaqooyin iyo warar dheeri ah, waxaan arki doonnaa wax walba July 27 ...
MacBook ama MacBook Air: labada midkee baa igu habboon aniga?
Kee baa aniga ii fiican: MacBookga cusub ama MacBookga hawada? Qormadan waxaan ku sharxi doonnaa waxa ay ku kala duwan yihiin labadan kombiyuutar ee Apple.
Laptop-ka Xiaomi wuu dhaafi doonaa Macbook Air
Laptop-ka Xiaomi ayaa dib u soo muuqday, markan waxay ku dhowdahay soo saaristiisa waxayna dhaafi doontaa Macbook Air ama ugu yaraan taas oo laga sheegay agagaarka Xiaomi
ASUS C301SA Chromebook hadda waa loo heli karaa horay-amar
Laptop-ka ASUS C301SA, ee ugu fiican Chromebook-ka suuqa ku jira, ayaa hadda loo heli karaa amar hore. Soo hel buug-gacmeedka loo yaqaan 'Chromebook' oo ay ku jiraan tusaalooyin aad u xun.
Haddii aad tahay gamer, Corsair wuxuu ka dhigayaa inta ugu badan Mac-gaaga
Waxyaabaha loo yaqaan 'Corsair' waxaad ka heli kartaa inta ugu badan ee Mac-gaaga ah ciyaaraha fiidiyowga, qalab heersare ah oo nolol cusub siin doona kumbuyuutarkaaga.
Waxaan tijaabinay SSD-ka Kale ee Dunida, OWC Mercury 6G
Waxaan si faahfaahsan u falanqeyneynaa SSD-ka Kombuyuutarrada kale ee Adduunka, imtixaannada ka dib waxaa noo cadaatay in sannado badan oo loo qoondeeyay Apple ay ka dhigeyso kuwa ugu fiican.
Miyuusigga kumbuyuutarkaaga kuugu jiraa miyaanu shidanayn? Tani waa waxa dhacaya
Haddii aadan yareyn karin nalka kumbuyuutarka ee ku yaal MacBook-gaaga, iskuday inaad ka xirto qalabka kombiyuutarka ee ku shaqeeya nalka